Miara-monina sy … mifamono | NewsMada
Miara-monina sy … mifamono
Par Taratra sur 27/01/2017
« Isika ihany io… », hoy ny voalazan’ilay tononkira iray izay. Marina tokoa izany, raha jerena ny olana sedrain’ity firenena ity sy ny vahoaka malagasy. Isika malagasy ihany tokoa no manana ny vahaolana. Miankina amin’ny firaisankinantsika ny zava-drehetra : « ny firaisankina no hery », hoy ny Ntaolo. Ny mpitondra, rahateo, anarany fotsiny ny hoe manan-kery fa tsy mahefa ny adidiny sy toa « malazolazo ».
Noho isika, matoa tonga eo amin’ny fitantanana ny firenena ny mpitondra ankehitriny. Antsika koa ny teny farany amin’ny fanesorana na amin’ny fitazonana azy ireo amin’izany toerana izany. Tsy amin’ny tsy rariny sy ny fihoaram-pefy izany fa amin’ny fanarahan-dalàna, antoky ny firindran’ny fiarahamonina.
Mikasika izay indrindra, toa miara-monina sisa ny samy Malagasy fa tsy misy intsony ny tena fiarahamonina. Ny trano, ny fokontany, ny kaominina, sns, no iraisana fa ny fiainana, samy maka ho azy, samy manao izay saim-pantany sy izay heveriny fa hampitony ny fony ary, indrindra, samy mikendry izay ho tombontsony.
Ekena fa mahatofoka ny kolikolin’ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana, miampy ny kiantranoantrano, samy mahatonga ny meloka hiriaria. Na izany aza, nahoana isika no misafidy ny fitsaram-bahoaka, mety hitarika amin’ny fifamotehana eo amin’ny samy « madinika » ?
Mihazakazaka ny fisondrotry ny vidim-bary raha vao hitan’ireo mpivarotra fa tsy avy ny orana, izay tsy maintsy hanaratsy ny vokatra, amin’ity taona ity. Rehefa apetraka ny fanontaniana, tsy hita izay tena marina. « Hatrany am-potony io », hoy izy ireo, saingy tsy hay hoe aiza ilay « fotony » ? Ny tantsaha, tsy nampiakatra ; ny mpanafatra, mbola tsy nilaza hoe niakatra koa ny vidiny any ivelany any.
Ny marina, mamy loatra ilay tombontsoa mihoa-pampana ao anatin’ny fotoana fohy. Tombom-barotra mety hampanankarena, saingy itambesaran’ny alahelon’ny maro anisa. Na inona na inona anefa ambara, mbola isika ihany io. Na hamerina ilay fiarahamonina mifamelona na hiara-honina fotsiny, saingy hifamono.